Knowledge - The Geek Text
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■ဘယ်ချပ်တန်ဆာကမှမကာကွယ်နိုင်တဲ့ အလွန်လေးသောအမြောက်သေနတ် Railguns အမြှောက်သေနတ်ရဲ့ပြောင်းဟာ လက်ကိုင်သေနတ်ရဲ့ပြောင်းနဲ့ ဆင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် လက်ကိုင်သေနတ်ထက် အဆတစ်ရာလောက်ပိုကြီးပါတယ် အနာဂါတ်က အမြှောက်လက်နက်တွေဟာ မီးရထားသံလမ်းလိုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ် ဒီလိုလက်နက်တွေကို Railguns(ရေးဂန်းစ်)လို့ခေါ်ပြီးတော့ အမြှောက်ပစ်ဖို့ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီစက်ကွင်းတွေကို အင်အားကြီးတဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအားနဲ့ တီထွင်ထားပါတယ် မျဥ်းပြိုင်လိုပြိုင်နေတဲ့ အမြှောက်ဟာ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖိုဓာတ်မဓာတ်ဓာတ်ငွေ့ကြောင့် ဒီအမြှောက်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ နေအာက်ထပ်အရှိန်ကို ထုတ်လုပ်ပါတယ် ဒါတွေက အယူအဆသက်သက်ပဲဆိုပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ ဒီသေနတ်က အရမ်းအထင်ကြီးလောက်ပါတယ် ။ ဒီလိုအရမ်းလေးလံတဲ့ အမြှောက်သေနတ်ကိုတောင်မှ ကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့ အရှိန်မြှင့်တက်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ် ဘယ်ချပ်ဝတ်တန်ဆာမှ ရန်သူကို ဒီလက်နက်ရဲ့ရန်ကနေ မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး ဒီသေနတ်ရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ အမြှောက်ရဲ့ ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် ပျက်ဆီးလွယ်ပြီးတော့ လက်နက်က စွမ်းအားတွေ အရမ်းကုန်ခမ်းစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ […]
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■သေနတ်တစ်ချက်ပစ်တိုင်း ဘယ်အရာကိုမဆိုအရည်ပျော်ကျသွားစေနိုင်သည့်လက်နက် ကျွန်တော်တို့ အခုထပ်ပြောပြမယ့် လက်နက်ကတော့ သေနတ်ပစ်တိုင်းမှာ အရည်ထွက်လာမယ့် လက်နက်တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒီလက်နက်က USA စစ်တပ်ရဲ့ အလားအလာကောင်းတဲ့ တီထွင်မှုတွေထဲကတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအားနဲ့ ပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ ဒီလက်နက်ဟာ သေနတ်ပစ်တိုင်း အရည်ကျိုထားတဲ့ သတ္တုရည်တွေ အင်အားကြီးစွာနဲ့ ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ်မှတ်ကို လျှပ်စစ်သံလိုက် စက်ကွင်းနဲ့ တိုက်ရိုက် ပစ်ခတ်မှာဖြစ်ပါတယ် အားကြီးတဲ့ တွန်းအားက ဒီအရည်လက်နက်ပစ္စည်းကို အလွန်မြန်တဲ့အရှိန်အဖြစ် မြှင့်တင်ပေးပါတယ် အရမ်းလေးလံပြီး ကာကွယ်မှုကောင်းတဲ့ တင့်ကားတွေကိုတောင် အပေါက်တွေနဲ့ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အရမ်းအားကြီးတဲ့ ပစ္စည်းတွေတောင် ဒီသတ္တုအရည်ပျော်နဲ့ ထိတာနဲ့ ဖယောင်းအရည်ပျော်သလို အရည်ပျော်ကျသွားနိုင်ပါတယ် လောလောဆယ်တော့ ဒီလက်နက်ဟာ ထုတ်လုပ်ဆဲအခြေအနေမှာပဲ ရှိပါသေးတယ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ ဒီသေနတ်ရဲ့ […]
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■တစ်မိနစ်အတွင်းကျည်ဆံပေါင်း၁၂သိန်းပစ်ခတ်နိုင်ပြီး အသံလုံးဝမထွက်သောသေနတ် အခုအသစ်ပြောပြမယ့် လက်နက်က ကျွန်တော်တို့ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ လက်နက်တွေနဲ့မတူဘဲ ကျည်ထွက်အောင် သေနတ်ပစ်တယ်ဆိုပေမယ့် အရမ်းအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းကြောင့် အထူးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ် ဒီလက်နက်ကို DREAD(ဒရက်တ်)လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူကတစ်မူထူးခြားတဲ့ပုံစံရှိပြီးတော့ ယမ်းမှုန့်အစား ဗဟိုခွာအားကို သုံးပါတယ် သေနတ်ရဲ့ကိုယ်ထည်ထဲမှာ ထူးခြားတဲ့အဝိုင်းတုံးလေးရှိပါတယ် ဒီအဝိုင်းတုံးက လျှပ်စစ်စွမ်းအားကိုသုံးပြီး လည်ပတ်လာပြီးတော့ ကိုယ်ထည်ထဲမှာရှိတဲ့ ကျည်ဆံအဝိုင်းလေးတွေက အရှိန်မြင့်လာပြီး ပစ်မှတ်ကို ပစ်ခတ်ပါတယ် DREAD(ဒရက်တ်)ဟာ ယမ်းမှုန့်မသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့် သူ့ရဲ့ သေနတ်ပြောင်းဝမှာ ရန်သူကိုချိန်နိုင်တဲ့ အလင်းတန်းလေးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့် သေနတ်ချိန်ရတာ အနည်းငယ်တော့အခက်အခဲရှိပါတယ်။ ဒီသေနတ်က အသံလုံးဝမထွက်တာကြောင့် အမိုက်စားလေးဖြစ်စေပါတယ် ဒါပေမယ့် အရေးအပါဆုံးအချက်ကတော့ M16 သေနတ်က တစ်မိနစ်အတွင်း ကျည်ဆံပေါင်း ၉၀၀ ပစ်နိုင်ပေမယ့် DREAD(ဒရက်တ်)ကတော့ တစ်မိနစ်အတွင်းမှာ ကျည်ဆံပေါင်း ၁၂သိန်းပစ်နိုင်ပါတယ် ။ […]
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■အကြားအာရုံကိုပါ တစ်သက်လုံးဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည့် LRAD Sound Cannon အသံကို လက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုနေတာ အချိန်တော်တော်တော့ ကြာနေခဲ့ပါပြီ သာမန်အားဖြင့်တော့ လူတွေရဲ့နားကမကြားနိုင်တဲ့ အသံလှိုင်းတွေကို အသုံးမပြုကြပါဘူး သေစေနိုင်တဲ့လောက်တာမဟုတ်တဲ့ အသံလက်နက်တွေမှာ အဲ့တာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ အရမ်းကျယ်လောင်တဲ့အသံတွေကို ထုတ်လွှတ်ပြီး တစ်ဖက်ရန်သူတွေကို တန့်စေပြီး ကြောက်လန့်အောင် နှောင့်ယှက်ပါတယ်။ ဒီလိုအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ LRAD Sound Cannonကို တီထွင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီလက်နက်ဟာ ၁၆၂ ဒယ်ဆီဘယ်လ် အထိမြင့်တဲ့ အသံအကျယ်ကြီးတွေကို ထုတ်လွှတ်ပါတယ် ဒါကို မျက်စိထဲမြင်အောင် ရှင်ပြရမယ်ဆိုရင် ခေတ်ပေါ် ဂျက်လေယာဥ် တစ်စင်းဟာ ၁၃၀ ကနေ ၁၄၀ ဒက်ဆီဘယ်လ်ထိရှိတဲ့ အသံတွေကိုထုတ်လွှတ်ပါတယ် တကယ်တမ်းပြောရရင် ဒါက ဂျက်လေယာဥ်ဘေးမှာ မတ်တပ်သွားရပ်နေရသလိုပါပဲ ။ LRAD […]
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■ချက်ချင်းမနာကျင်စေဘဲ စက္ကန့်ပိုင်းကြာမှနာကျင်မှုကိုခံစားရစေသောလက်နက် နည်းပညာမှာ အလင်းကို အသုံးမပြုဘဲ အပူကို အသုံးပြုတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အကျိုးသက်ရောက်မှုက ဘာလဲ? ဒီလိုအရာက လက်တွေ့မှာ တကယ်ရှိနေပါပြီ သူ့ကို Active Denial System(အက်တစ် ဒီနိုင်း စစ်စတမ်)လို့ခေါ်ပါတယ် သူ့ကို ရဲတွေက အသုံးပြုကြပြီးတော့ သေစေနိုင်လောက်တဲ့ လက်နက်မျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းကို သုံးပြီး ရန်သူရဲ့ အရေပြားကို ပြင်းထန်တဲ့ လောင်ကျွမ်းမှုလို ခံစားရတဲ့ အထိအတွေ့ကို ဖြစ်စေပါတယ် ဒါက တိုက်ရိုက်နာကျင်တာမျိုး ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘဲ ကြောက်လန့်ပြီး ထွက်ပြေးလိုတဲ့စိတ်ကို ဖြစ်စေပါတယ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ ဒီလျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းဟာ ချက်ချင်းနာကျင်စေတာ မဟုတ်ဘဲ စက္ကန့်ပိုင်းကြာမှ နာကျင်မှုကို စခံစားရတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြုံတောင့်ကြုံခဲတဲ့ […]
February 12, 2022 February 13, 2022 The Geek
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■ရန်သူကိုလောင်ကျွမ်းစေမယ့်အစားမျက်စိကွယ်အောင်ပဲလုပ်နိုင်တဲ့ လေဆာသေနတ် ဒီလို ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့လက်နက်တွေအကြောင်း ပြောတာနဲ့ သိပ္ပံကားတွေထဲက လေဆာသေနတ်တွေကို အရင်ဆုံး မျက်စိမြင်ယောင်လာကြမှာပါ အပူဓာတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ စွမ်းအင်ကို သုံးစရာမလိုပါဘူး အားကောင်းတဲ့ အလင်းတန်းဆိုရင်ပဲ လုံလောက်နေပါပြီ။ American Phasr Rifle(အမေရိကန် ဖေဆာ ရိုင်ဖယ်) သေနတ်ဟာ မသေစေနိုင်တဲ့ လေဆာ လက်နက် ဖြစ်ပါတယ် သူက ရန်သူကိုလောင်ကျွမ်းစေမယ့်အစား မျက်စိကွယ်အောင်ပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ် အဲ့လိုလုပ်တာလည်း ထိရောက်တာပဲ မဟုတ်လား? မျက်စိကွယ်စေနိုင်တဲ့ လေဆာလက်နက်တွေကို စတီထွင်ခဲ့တာ အချိန်နည်းနည်းတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ UN သဘောတူညီချက်ရေးထိုးပွဲမှာ လုံးဝမျက်လုံးကွယ်စေနိုင်တဲ့ လေဆာလက်နက်တွေကို တားမြစ်ခဲ့ပါတယ် ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲ Phasr(ဖေဆာ)သေနတ်ကတော့ အချိန်ခဏတာပဲ မျက်စိကွယ်စေနိုင်တာပါ လေဆာနည်းပညာနဲ့ မျက်စိကွယ်အောင် တစ်ခုတည်း လုပ်နိုင်တာ […]
■အရမ်းပြင်းထန်တဲ့အလင်းတွန်းအားကိုအသုံးပြုသော 5P-42 Fillin(eagle owl)
February 12, 2022 February 12, 2022 The Geek
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■အရမ်းပြင်းထန်တဲ့အလင်းတွန်းအားကိုအသုံးပြုသော 5P-42 Fillin(eagle owl) ၂၀၁၉ ခုနှစ် အစောပိုင်းမှာ ရုရားစစ်သင်္ဘောအချို့မှာ အမြင်အာရုံ အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်တဲ့ လက်နက်တွေ တပ်ဆင်ထားတယ်လို့ သတင်းထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ် ဆိုလိုတာကတော့ ဒီလက်နက်က ရန်သူတွေကို ခဏတာမျက်စိကွယ်တာ၊ မျက်စိလည်လမ်းပျောက်တာတွေလုပ်နိုင်တဲ့အပြင် မျက်စိအာရုံကို အမြင်မှာစေခြင်းတွေကို လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလက်နက်တွေဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက်နက်တွေလိုမျိုး မဟုတ်ပါဘူး လက်နက်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်ရောက်သွားရ ဥပမာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမွှေးပွပွ နဂါးလေးက ခင်ဗျားတို့ကို လက်ဖျက်ရည်သောက်ဖို့ သွန်ပေးနေတာမျိုး မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာ ရောင်စုံ စက်ဝိုင်းတွေ အလင်းပျောက်လေးတွေ၊ စူးရှတဲ့အလင်းတွေကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမြင်အာရုံကို နှောင့်ယှက်မှာပဲ ဖြစ်တာကိုး မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ် ဒီအစမ်းလေ့လာဆဲ လက်နက်ရဲ့နာမည်ကတော့ 5P-42 Fillin(eagle owl)[ဖိုက်ပီ […]
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာဖြစ်စေခဲ့သော အသံလှိုင်းလက်နက် ၂၀၁၈ တုန်းက တရုတ်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သံတမန်ဟာ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာနဲ့ အကြားအာရုံ ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် ဆရာဝန်ပြခဲ့ကာ သူဟာ ထူးဆန်းတဲ့အသံတွေကို ကြားယောင်နေတဲ့အကြောင်းကို ဆရာဝန်ကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ် ဒီထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဖြေရှင်းချက်ကတော့ သံတမန်ဟာ သေစေနိုင်လောက်တဲ့အထိ မပြင်းထန်တဲ့ အသံလှိုင်း လက်နက်နဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့် စစ်တပ်က ဒီနိုင်ငံမှာ အသံလှိုင်းသေနတ်ကို လူတွေမသိအောင် သိုသိုသိပ်သိပ် အသုံးပြုနေကြတယ်လို့ တွေးထင်ခဲ့ကြပါတယ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေမကြားရနိုင်တဲ့ အသံတွေ ရှိပါတယ် Infrasound(အင်ဖရာဆောင်းဒ်)ဟာ လူတွေ ကြားနိုင်တဲ့ အသံလှိုင်းထက် နိမ့်ကျပြီးတော့ Ultrasound(အာလ်ထရာဆောင်းဒ်) ရဲ့အသံလှိုင်းဟာ ပိုမြှင့်ပါတယ် ဒီအရာနှစ်ခုလုံးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အသုံးချရင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ […]
■ တစ်ကြိမ်တည်းမှာကျည်ဆန်တွေသန်းနဲ့ချီပြီးပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ စက်သေနတ်
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■ တစ်ကြိမ်တည်းမှာကျည်ဆန်တွေသန်းနဲ့ချီပြီးပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ စက်သေနတ် စက်သေနတ်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ မျက်တောင်တစ်ခတ် အတွင်းမှာ ကျည်ဆန်တွေ အကုန် ကုန်သွားအောင် ပစ်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် သူတို့မှာကန့်သတ်ချက် တစ်ခုရှိပါတယ် ဒါကတော့ ဒီသေနတ်တွေက တစ်ခါပစ်တိုင်းမှာ ကျည်တစ်ထောင့်ပဲထွက်ပါတယ်ဒါဆို တစ်ကြိမ်တည်းမှာ ကျည်ဆန်တွေ သန်းနဲ့ချီပြီး ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ စက်သေနတ်ကရော? ဒီစက်သေနတ်ရဲ့ နာမည်ကတော့ metal storm(မက်တယ်လ် စတုန်းမ်း)လို့ ခေါ်ပြီးတော့ သူ့မှာ ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့စနစ်တွေ၊ အမြှောက်တွေနဲ့ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ သေနတ်ပြောင်းတွေ ပါတတ်ပါတယ် ဒီနည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး လက်နဲ့ကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့ သေးငယ်တဲ့သေနတ် အဖြစ် ပြောင်းလဲ စမ်းသပ်မှုဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ် ဒီစီမံကိန်း ဖန်တီးသူဟာ သြစတေးလျနိုင်ငံသား Mike O’Dwyer(မိုက်ခ် အို’ဒွာယာ)ဟာ လက်နက်ရဲ့ တည်ဆောက်တဲ့ပုံကို သေနတ်ပစ်တဲ့နှုန်းနဲ့ […]
■စက်ရုပ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားကြတဲ့ Nerod F5
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■စက်ရုပ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားကြတဲ့ Nerod F5 အဆင့်မြင့် နည်းပညာဟာ အခုခေတ်မှာ အဆမတန် ခေတ်ရှေ့ပြေးနေတဲ့အတွက် တကယ့် လေဆာသေနတ်တွေတောင် တကယ်ရှိနေနိုင်ပါတယ် ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ တစ်မူအထူးခြားဆုံး အံ့အားသင့်စရာ အကောင်းဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး လက်နက်တွေ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်ကတော့ အခုမေးခွန်းအတွက် အဖြေကိုသိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တေ်ပြောတာကို ယုံလိုက်ပါ ဒါတွေက ခင်ဗျားတို့ တွေ့ဖူးတဲ့အရာတွေနဲ့ ဆီနဲ့ရေလို ကွာပါတယ် ဒီလို အင်အားကြီးပြီး ကြီးမားတဲ့သေနတ်ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရန်သူတွေ တွေ့လိုက်တာနဲ့တင် ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကြောက်သွားရမှာပါ ဂျူလိုင်လ ၁၄ရက်နေ့က ပြင်သစ်နိုင်ရဲ့ စစ်ရေးပြပွဲက ဒီလက်နက်ကို မြင်လိုက်ရင် ခင်ဗျားတို့ ကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့ ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းကို တွေ့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒီသေနတ်က သူရဲ့ပစ်မှတ်ကို […]